FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA ROSIANA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika rosiana
Leo ilay kilalao Rosiana
Rosiana Terrier kilalao
Terovaly kely an'ny Moskooviana
Rosiana Longhaired Toy Terrier
ruhsh-uh n ahy
Ny Kilalao Rosiana, antsoina koa hoe Russkiy Toys, dia alika mitovy amin'ny kilalao. Karazana fijery miavaka tokoa izy io. Izy io dia iray amin'ireo karazany kely indrindra eto an-tany, ary mety ho lava volo na lava volo. Toy ny serfa kely ny Terriers kilalao Rosiana volo malefaka. Manana tongotra efatra lava izy ireo, vatana matanjaka, tendany lava, ary loha kely misy vava kely, maso marani-tsaina lehibe ary sofina telozoro mitsangana. Ny Longhaired Russian Toy, fantatra ihany koa amin'ny hoe Toy Terrier Rosiana ary ny Longhaired Toy Terrier ao Moskoa dia kopian'ny karazana volon-doha ary tsy mitovy raha tsy noho ny volony lava lava mahafinaritra amin'ny sofiny. Raha mahita kilalao Rosiana lava volo ianao dia ho talanjona. Palitao fohy manerana ny vatana sy ireo sofina ireo toa ny lolo? Tsy hahita alika hafa mihitsy ianao vokatr'izany! Ireo karazany roa dia azo zahana ary manana alika lava sy lava volo amin'ny fako iray ihany, na izany aza, kilalao miloko volo roa dia afaka manome zaza lava volo ao amin'ny fako (toy ny tamin'ny fiantombohan'ny karazany) fa kilalao lava lava volo roa kosa- hiteraka karazana volon-doha. Ho an'ny seho ambony Rosiana kilalao ny loko miloko indrindra sy mainty, mena (avy amin'ny mazava ka hatramin'ny lalina) ary miloko amin'ny karazana volo lava sy malama. Mety ho hitanao koa ny volontsôkôlà sy volondavenona, tsy fahita firy amin'ny Longhaired Russian Toys, sy ny manga sy ny tan, ny loko tsy fahita firy. Ny kilalao Rosiana manana ny kalitaon'ny fiompiana dia mety misy teboka fotsy kely eo amin'ny tratrany ary ny rantsan-tongony sy ny biby fiompy dia mety ho mainty, volontany na manga (afa-tsy ny mena). Tsy midika izany fa ny loko mena Rosiana Main Terrier dia tsy mety manana kalitao biby. Saingy tsy ho noho ny loko izany. Voarara ny loko fotsy. Ity loha ity dia manana loha kely ary ny orona kely dia mainty na mifanitsy amin'ny lokon'ny alika. Voafaritra tsara ny fijanonana. Avo somary avo ny karandohany fa tsy dia malalaka (ny sakany amin'ny haavon'ny takolaka dia tsy mihoatra ny hahavon'ny karandohany). Manipy sy maranitra ny molotra, somary fohy kokoa noho ny karandohany. Manify ny mahia, mahia, tery ary mainty na mifanentana amin'ny loko. Ny valanoranony / nify dia kely sy fotsy. Manana kaikitry ny hety izy io - irina enina amin'ny valanorano ambony sy ambany no irina. Ny maso dia somary lehibe, boribory, somary misongadina, milamina tsara ary mahitsy, mainty. Ny hodi-maso dia maizina na mifanentana amin'ny loko, matevina. Ny sofina dia lehibe, mahia, avo no avo, mahatakatra. Lava ny tendany, mahia, avo avo, somary miolaka. Somary lalina ny tratra, tsy malalaka loatra, miendrika oval. Vetivety dia tafapetraka ny rambony (vertebra roa na telo sisa no tavela), avo be ny gaily. Any amin'ny firenena izay voararan'ny lalàna ny fidirana amin'ny rambony dia azo avela ao amin'ny toetoetrany voajanahary izany. Tokony hoentina somary avo kokoa noho ny haavon'ny lamosina izy io, faniry amin'ny fiolahana fijaliana.
Mpinamana be fitiavana, manan-tsaina, mahatoky ho anao sy ny fianakavianao. Hifankatia eo noho eo ianao, ary ny olana tokana hoforonin'ny RTT anao eo am-pahatongavanao dia ny hamporisihany anao iray hafa. Mailaka, mafy orina, mandritra ny androm-piainany natokana ho an'ny tompona - izany no ilazalazan'ny tompona Toy ny Rosiana ny alikany. Alika kely sy kanto, lava ranjony, vita toradroa. Mavitrika, tena velona, ​​sady tsy saro-kenatra no tsy masiaka, ireo alika ireo dia voalaza fa mora zarina. Ny fampiofanana momba ny fankatoavana dia atolotra ho an'ny haben'ny alika. Ny RTT dia mahafinaritra miasa amin'ny fisedrana haingana. Alika mpiara-miasa marina. Te-hiaraka aminao aho na aiza na aiza ary noho ny habeny dia azonao atao ny mitondra azy. Ankafizo mandray anjara amin'ny zavatra ataonao rehetra. Alao antoka fa mafy orina ianao, azo antoka, tsy miovaova ity alika ity mpitarika fonosana hialana Syndrome kely alika , entanin'ny olombelona olan'ny fitondran-tena . Tadidio foana, alika dia alika canines fa tsy olombelona . Aza hadino ny mahita ny voajanahary voajanahary ho biby.
Hahavony 8 - 10 santimetatra (20 - 26 cm)
Milanja 3 - 6 pounds (1,3 - 2,7 kg)
Ny kilalao Rosiana dia tsara amin'ny fiainana an-trano.
Na dia manintona aza ny fitondrana ireo zavaboary marefo ireo, dia alika kely mavitrika mila a mandeha isan'andro . Ny lalao dia hikarakara be dia be ny filan'izy ireo manao fanatanjahan-tena, na izany aza, toy ny karazany rehetra, ny lalao dia tsy hahatanteraka ny toetrany voalohany handeha. Ny alika izay tsy afaka mandeha amin'ny diabe isan'andro dia azo inoana fa mampiseho olana maro amin'ny fitondran-tena. Izy ireo koa dia hankafy romp tsara amin'ny faritra azo antoka sy malalaka tsy misy firaka, toy ny tokotanin-trano mimanda. Aza mieritreritra fa satria kely izy dia tokony voafatotra amin'ny toerana kely.
Tokony ho 11 taona
Tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20, ny anglisy Toy Terrier dia iray amin'ireo alika haingo malaza indrindra any Rosia. Saingy, tamin'ny vanim-potoana 1920 - 1950, saika nijanona ny fandefasana terriers kilalao ary ny isan'ireo alika dia nianjera tamin'ny ambaratonga mitsikera. Tamin'ny tapaky ny dimampolo taonany monja no nanomboka ny fahaterahan'ny teraka indray ny mpiompy alika rosiana. Saika ny alika rehetra izay nampiasaina tamin'ny fiompiana dia tsy nanana razambe maro an'isa amin'izy ireo dia tsy nisy rà madio. Ny fenitra napetraka ho an'ny Toy Terrier dia samy hafa be tamin'ny fenitry ny anglisy Toy Terrier amin'ny lafiny maro. Nanomboka tamin'io fotoana io, ny fivoaran'ny karazany any Russia dia nandeha tamin'ny làlan-kalehany. Tamin'ny 12 Oktobra 1958, alika roa volo volo, ny iray manana volo somary lava kokoa, no namelona alika lahy iray misy sisiny mahavariana amin'ny sofiny sy ny rantsam-batany. Tapa-kevitra ny hitazona io toetra io. Ny lahy dia nampirafy alika vavy izay lava volo ihany koa. Noho izany dia niseho ilay variant longhaired an'ny terrier kilalao. Nantsoina hoe Moscow Longhaired Toy Terrier izy io. Mpamboly alika avy any Mosko, Yevgueniya Fominichna Zharova no nitana andraikitra lehibe tamin'ny famoronana karazany hafa io. Ny fivoarana maharitra mitoka-monina sy ny fizotran'ny fifantenana manokana dia nahatonga ny famoronana karazany vaovao, ny Toy ny Rosiana misy karazany roa: lava volo sy malama volo.
Ny FCI dia manaiky ity karazany ity ho toy ny 'Russkiy Toy' - palitao lava sy palitao malama.
Rocky Mountain Romeo, kilalao Russkiy Toy 1½ taona
Sassafras Moccasins, zanak'alika Rosiana Longhaired Toy Terrier 8 herinandro
Shih Tzu pekingese Mix vaovao
'Ity i Sassafras Moccasins, Toy Longhair Rosiana, lehibe tamin'ny herintaona sy tapany izy rehetra ary namana mahafinaritra.'
Sassafras Moccasins, kilalao Longhair Rosiana, lehibe tamin'ny faha-1½ taonany avokoa
yorkie terrier afangaro amin'ny Shih Tzu
Usik, Terrazan'ny kilalaon'ny olona Rosiana mandritra ny 4 volana, sary natolotry ny aReLeTTe Rosiana mpanao lava volo Rosiana
Anastasia ity, fananan'i Patricia Parker-Owen.
Puppy Toy Rosiana miloko marevaka antsoina hoe Osi Rikki Tikki Tava tamin'ny faha-4 taonany, an'i Inga Kolbina
Hijery ohatra misimisy momba ny kilalao Rosiana
Sary kilalao rosiana 1
Sary kilalao Rosiana 2
mavo sy sokola mainty Labs
husky volondavenona miaraka amin'ny maso manga
laboratoara afovoany amerikana afangaro zanak'alika